Global Voices teny Malagasy · 13 Jolay 2014
Tantara tamin'ny 13 Jolay 2014
Mediam-bahoaka13 Jolay 2014
"...ny fahamarinana tena mampangorintsina indrindra dia mety hoe tsy miandry mandrakariva ny mpanao lalàna mba hangataka fahazoan-dàlana ara-dalàna ny masoivoho Rosiana mpampihatra lalàna rehefa tonga amin'ny hoe fanaovana polisin'ny aterineto."
Amerika Latina13 Jolay 2014
Miara-mitaintaina amin'ny ekipam-pireneny izay nandresy an'i Soisa tamin'ny elanelan'isa kely 1-0 tamin'ny fanalavàm-potoana ireo mpankafy baolina kitra Arzantina.
Azia Atsimo13 Jolay 2014
Azia Atsinanana13 Jolay 2014
Nanangona lahatsary notontosain'ireo tanora Indoneziana izay manazava ny vinavinan'izy ireo momba ny maha-zava-dehiben'ny fifidianana filoham-pirenena 2014 ny EngageMedia.
Manontany ny dikan'ireo bisikileta fotsy mitandahatra ao amin'ny arabe ao Montevideo, Orogoay ny olona. Hitanao ato amin'ny lahatsoratra ny valinteny.
Mpikatroka iray mafàna fo niantso hetsi-panoherana sy ezaka fanarenana, notsenain'ny manampahefan'ny tanàna Serba iray tamin'ny fandrahonana tety anaty aterineto.
Niventy hira iray misy tonony manaraby an'i Brezila noho ny fahareseny nanoloana an'i Arzantina tamin'ny Amboara Erantany 1990 ny Orkesitry ny Zandary "Alto Peru " nandritry ny andro fankalazana ny nahazoana ny fahaleovantenan'i Arzantina.